ပုတ်ပွပြီး ခုတ်ဖြတ်ထားသော အမျိုးသမီးလက်တစ်စုံ ၏ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း -
ပုတ်ပွပြီး ခုတ်ဖြတ်ထားသော အမျိုးသမီးလက်တစ်စုံ ၏ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
Category : မှုခင်း
လက်မောင်းရင်းမှ ခုတ်ဖြတ်ထားသော လက်တစ်စုံတွေ့လို့ စစ်ဆေးလိုက်ရာ လူပျောက်ကြော်ငြာထားတဲ့ အမျိုးသမီး ဖြစ်နေ
ပုတ်ပွပြီးခုတ်ဖြတ်ထားသောအမျိုးသမီးလက်တစ်စုံ ၏နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊မြင်းဇာရွာမှဒေါ်ခင်ညိုရီဆိုသူသည် 24.11.2019. ညနေ53း0ခန့်အချိန်တွင်မောင်လင်းရွာသို့ခဏသွားမည်ပြောပြီး ထွက်သွားရာမှာအိမ်သို့ ပြန်မရောက်သည်မှာ ၅ရက်မျှကြာမြင့်သည့်အတွက်မိသားစုများမှ စိတ်ပူနေကြ၍ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှတစ်ဆင့် ကန်နယ်မြေရဲစခန်းသို့ လူပျောက်တိုင်ကြားခဲ့ကြပါတယ် …။
ထို့နောက် ကန်နယ်မြေရဲများနှင့် ကျေးရွာအနီးနားမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပူးပေါင်း၍ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် 29.11.2019ရက်နေ့တွင် မြင်းဇာရွာနဲ့ ၅မိုင်ခန့်အကွာဘော်ပြင်းကျေးရွာ မြစ်သာမြစ်ကူး တံတားတွင် အိတ်ဖြင့် ထုပ်ထားသောအထုပ် မျောပါလာသည်ကို ဆယ်ယူ ကြည့်ရှုခဲ့ရာ
လက်မောင်းရင်းမှ ခုတ်ဖြတ်ထားသော အမျိုးသမီး လက်တစ်စုံကိုတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတွက် စစ်ဆေးရန် ဂန့်ဂေါမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ တာဝန်ရှိသူများမှပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ် …။
၄င်းနောက်ရှာဖွေမှုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ 1.12.2019တွင်ကိုယ်ခန္ဓာ အလောင်းကို မြင်းဇာရွာနဲ့ ၂မိုင်ခန့်အကွာ ကျွဲနန်းကျေးရွာအနီး မြစ်သာမြစ်ထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် …။
အမှုမှန် အမြန်ဆုံးပေါ်ပါစေ….နှလုံးရောဂါရှိသူများ ဓာတ်ပုံမကြည့်ရန်
Gan Gaw – Baw Pyin Village
ပုတျပှပွီး ခုတျဖွတျထားသော အမြိုးသမီးလကျတဈစုံ ၏ နောကျဆကျတှဲ သတငျး
လကျမောငျးရငျးမှ ခုတျဖွတျထားသော လကျတဈစုံတှလေို့ စဈဆေးလိုကျရာ လူပြောကျကွျောငွာထားတဲ့ အမြိုးသမီး ဖွဈနေ
ပုတျပှပွီးခုတျဖွတျထားသောအမြိုးသမီးလကျတဈစုံ ၏နောကျဆကျတှဲ သတငျး
မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ဂနျ့ဂေါမွို့နယျ၊မွငျးဇာရှာမှဒျေါခငျညိုရီဆိုသူသညျ 24.11.2019. ညနေ53း0ခနျ့အခြိနျတှငျမောငျလငျးရှာသို့ခဏသှားမညျပွောပွီး ထှကျသှားရာမှာအိမျသို့ ပွနျမရောကျသညျမှာ ၅ရကျမြှကွာမွငျ့သညျ့အတှကျမိသားစုမြားမှ စိတျပူနကွေ၍ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးမြားမှတဈဆငျ့ ကနျနယျမွရေဲစခနျးသို့ လူပြောကျတိုငျကွားခဲ့ကွပါတယျ …။
ထို့နောကျ ကနျနယျမွရေဲမြားနှငျ့ ကြေးရှာအနီးနားမှာအုပျခြုပျရေးမှူးမြား ပူးပေါငျး၍ရှာဖှမှေုပွုလုပျခဲ့ရာတှငျ 29.11.2019ရကျနတှေ့ငျ မွငျးဇာရှာနဲ့ ၅မိုငျခနျ့အကှာဘျောပွငျးကြေးရှာ မွဈသာမွဈကူး တံတားတှငျ အိတျဖွငျ့ ထုပျထားသောအထုပျ မြောပါလာသညျကို ဆယျယူ ကွညျ့ရှုခဲ့ရာ
လကျမောငျးရငျးမှ ခုတျဖွတျထားသော အမြိုးသမီး လကျတဈစုံကိုတှရှေိ့ခဲ့သညျ့အတှကျ စဈဆေးရနျ ဂနျ့ဂေါမွို့ပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ တာဝနျရှိသူမြားမှပို့ဆောငျခဲ့ပါတယျ …။
၄ငျးနောကျရှာဖှမှေုဆကျလကျလုပျဆောငျခဲ့ရာ 1.12.2019တှငျကိုယျခန်ဓာ အလောငျးကို မွငျးဇာရှာနဲ့ ၂မိုငျခနျ့အကှာ ကြှဲနနျးကြေးရှာအနီး မွဈသာမွဈထဲတှငျ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပါတယျ …။
အမှုမှနျ အမွနျဆုံးပျေါပါစေ….နှလုံးရောဂါရှိသူမြား ဓာတျပုံမကွညျ့ရနျ
သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်းကျင့်မှုဖြစ်ပွား မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်း ကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် …။ ရောင်းဒေါင်းကျေးရွာ အရှေ့ပိုင်းမှာနေတဲ့ အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ်ရှိသီဟအောင် ဆိုသူ ဗေဒင်ဆရာက သူနဲ့ရည်းစားဖြစ်နေတဲ့ အပျိုကြီး ဒေါ်အေးမြင့် (၃၈)နှစ်ကို ကံနိမ့်နေလို့ ယတြာချေရမယ်လို့ပြောတယ်။ ယတြာက အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို သူ့ထံသို့ (၇)ပတ် တိုင်တိုင် ခေါ်လာပေးရမယ်လို့ဆိုပြီး သူ့ရည်းစားအပျိုကြီး ခေါ်လာပေးတဲ့ ကလေးမလေးတွေကို တည်းခိုခန်းကိုခေါ်ပြီး မုဒိန်းကျင့်တာပါ …။ သူ့ရည်းစား ဗေဒင်ဆရာရဲ့ စေခိုင်းချက်အရ ယတြာချေဖို့ ဒေါ်အေးမြင့် က …
ရည်းစား ကို စိတ်တိုင်းကျ ဆက်ဆံပြီး ပြည့်တန်ဆာခန်း ကိုငွေတစ်သိန်းခွဲ နဲ့ ရောင်းစား လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်
ရည်းစား ကို စိတ်တိုင်းကျ ဆက်ဆံပြီး ပြည့်တန်ဆာခန်း ကိုငွေတစ်သိန်းခွဲ နဲ့ ရောင်းစား လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ် သမီးဖြစ်သူ အိမ်ကနေပျောက်သွားလို့ ဖခင်ဖြစ်သူက ရဲစခန်း မှာ လူပျောက် လာတိုင်ထားပါတယ်..။ ဓာတ်ပုံထဲက ပုဂ္ဂိုလ်လေးက ကောင်မလေးရဲ့ ရည်းစားပေါ့ဗျာ သူက ကောင်မလေးကို ဆယ့်ငါးရက်ခန့် ခိုးယူပေါင်းသင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့ ဘုရင့်နောင်က ပြည့်တန်ဆာခန်းကိုငွေ တစ်သိန်းခွဲ နဲ့ရောင်းစား လိုက်တယ် .. ။ ဖစ်ချင်တော့ ဒီကောင်မလေး အသက်က ဆယ့်ငါးနှစ် လေးလ လို့ မွေးစာရင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်း အရ သိရပါတယ်…။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အင်းစိန်မြို့မ ရဲစခန်း မှနယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ရဲအုပ် ကျော်ဇင်ဦး …
This Year : 203715
Total Users : 498848
Total views : 2057002